Divergences: mabhangi vs magetsi | Ehupfumi Zvemari
Kazhinji pane pakave nemusiyano wakakura zvakadaro pakati pehunhu hwemabhangi nemagetsi. Kwavari kutora nzira dzakasiyana zvachose mune yega yega yezvikamu zvekutengesa izvo zvave kusimukira kubvira kutanga kwegore. Ivo havasi kudzika nemigwagwa pasi pechinhu chimwe chete, kure nazvo. Aya ndiwo maitiro atinogona kutaura seanopokana kubva pane ese maonero, sezviri kuratidzwa nekuumbwa kwemitengo yavo mumwedzi yekutanga yegore idzva iri.
Kune rimwe divi, zvinofanirwawo kuyeukwa kuti mukuwedzera kwazvino mumisika yemari, kuwedzera kwacho kwakatungamirwa naCaixabank, iyo yakayemurwa ne4,63%. BBVA ine 4,15% kana Santander ine 3,50%. Pane kudaro, padivi rekugadzirisa, Enagás yakaiswa nekuderera kwe1,31%, Red Eléctrica yadonha 1,13%, Iberdrola 0,81% uye Endesa ingangoita hafu yezana muzana. Mune chiitiko chakaramba chakatsiga kana chiitiko ichi chaitika mumisika yemari.
Nepo zvichipesana, zvakajairika kumakambani emagetsi kudhonza, dzimwe nguva nechisimba, indekisi inosarudzika yemari yeSpain, iyo Ibex 35, munguva dzakawandisa. Kusvika padanho rekuti kune vazhinji vashandisi mumapaki emunyika vanoisa mazita, neimwe nyasha, idzi tsika "senge imbwa uye kati." Ivo havawanzoenderana mune zvavo zvecustomer muzvikamu zvekupedzisira zvekutengesa.
1 Mabhangi vs magetsi: kune mhirizhonga
2 Panguva ipi ivo vakanyanya kunaka?
3 Misiyano yako mukusagadzikana
4 Yakabatanidzwa mumabhuruu machipisi
Mabhangi vs magetsi: kune mhirizhonga
Muchokwadi iwo zvikamu muzvikamu zvine zvido chaizvo zvinopesana kubva pakutanga sezvatichaona kubva zvino zvichienda mberi. Uye mune chero zvazvingaitika, iwo anotarisirwa kune akasiyana zvachose maprofiles evadiki nepakati varimi. Nepo mune izvi zvakakosha zvebhengi chikamu chakanangana nerudzi rweutsinye saver, zvakafanana hazviitike nemakambani emagetsi. Kana zvisiri izvo zvinopesana, iwo ndiwo mafungidziro evasina mari vanochengetedza kana vanozvidzivirira avo vanotsvaga kuchengetedza mari yavo pane zvimwe zvinokatyamadza.
Kune rimwe divi, zvakafanirawo kusimbisa kuti zvikamu zviviri izvi zvemusika wemasheya zviri kuita nenzira dzakasiyana maererano nemaitiro avo. Muchikamu chebhengi chiri pachena bearish panguva ino, nepo zvichipesana mune zvekushandisa zvakatosiyana. Ndokureva, pasi pechikamu chakasimba kwazvo chekusimudzira, zvirinani kwenguva. Kuwirirana kwavo kwesimba kunoenda nenzira yavo uye ichi chinhu chinowanzo nyonganisa chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi.
Panguva ipi ivo vakanyanya kunaka?
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvikuru zvezvikamu izvi mukuongorora kwavo ndepazvinenge zviri nyore kuvashandira kuti vaite kuti kuchengetedza kwacho kubatsire. Zvakanaka, hapana zvakavanzika zvakawanda kusvika pamhedziso yakajeka nezvazvo. Iri mune yakanyanya kuwanda nguva yehupfumi uko kuchengetedzeka kwenzvimbo yemabhangi kunogona kuita zvirinani. Sezvazviri mune mamiriro ekukwira kwemitero, sezvo zvichizofanana nenyaya yekuti ivo vanounza yakawanda purofiti mukuita kwavo. Chaizvoizvo kuburikidza nekondirakiti yechero mhando yemari.
Kunyangwe pane izvo zvinopesana, nguva dzakawandisa muhupfumi ndidzo dzinonyanya kukudziridza kukwira kwakasimba mumisika yemari nemitengo yemusika wemasheya echikamu chemagetsi. Hazvishamisi kuti vanouya kuzoita senzvimbo dzakachengeteka dzimwe nguva dzekusagadzikana kukuru mumusika wemasheya uye, nekuwedzera, mune hupfumi. Nezvakanaka chaizvo mhedzisiro uye izvo pasina kupokana zvinogona kushamisika kupfuura mudiki kana wepakati investor. Kubva kune rimwe divi, ivo vane zvimwe zvezvikamu zvakakwiririsa zvemari yenyika. Nenzvimbo dzekumisidzana dzinogona kusvika pamatanho e7%.
Misiyano yako mukusagadzikana
Chimwe chinhu chinosiyanisa zvakanyanya mabhengi nemagetsi zvikamu kusagadzikana mukuchinja kwemitengo yavo. Hazvishamise kuti mune yekutanga inowanzo kuve yakanyanya kukwirira, iine misiyano yakakosha pakati pemitengo yayo yepamusoro uye yepasi uye nekudaro inodakadza kuita mashandiro ekutengesa kana panguva imwechete yekutengesa. Nekudaro, njodzi dzavo dzakakwirira uye kunyangwe dzichigona kuve dzinobatsira zvakanyanya, dzinokanganisawo kuti varimi vanogona kusiya maeuro mazhinji munzira. Izvo zvakakosha kuti iwe uongorore chinhu ichi kuti urege kuwana zvinopfuura kamwe kushamisika kubva zvino zvichienda mberi.
Kune rimwe divi, hunhu hwesangano remagetsi hwakagadzikana zvakanyanya maererano nemutengo wakatemwa nezvikamu zvaro. Mupfungwa iyi, kuchinja kwavo kunogadzirika nevatengesi vevatengesi nekuti havawanzo kudzikira kana kukoshesa pazasi pe2%. Ichi chikamu chinopa runyararo rukuru rwepfungwa kune vanonyanya kushandisa masheya vashandisi. Kusvika padanho rekuti ivo vanotenga iyi kirasi yemasheya kuti vagadzire yakatsiga yekuchengetedza bhegi yepakati nepakati yakareba. Chero chii chinoitika mumisika yemari.
Yakabatanidzwa mumabhuruu machipisi
Chero zvazvingaitika, imwe yemamwe madhinominesheni mune ese ari maviri maseti emusika wemasheya ndeyekuti dzimwe dzenhengo dzayo chikamu chemabhuruu machipisi eSpanish equities. Ndokunge, makambani ane yakakwira kwazvo capitalization uye ayo ane maakaundi ebhizinesi ayo anoonekwa seakagadzikana kwazvo.
Nekuwanda kwemari mumafambiro kuitira kuti zvive nyore kwazvo kupinda nekubuda mumisika yezvemari nemutengo wakagadziridzwa. Iko mune imwe yezviitiko iwe yauchabatwa munzvimbo dzako. Hazvishamise kuti huwandu hwechibvumirano mumatanho ese ari maviri hwakanyanya uye mune chero chiitiko chakakwirira kupfuura icho chezvimwe zvikamu zvebhizinesi zvakanyorwa pamusika wemasheya. Chii chinonzi garandi yezvinodiwa zvechero chimiro muinvestment. Chero chii chinoitika mumisika yemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Divergences: mabhangi vs magetsi
Mazhinji masevhisi anomiririra ane chekuita neyekubhadhara account